कोरियाको सपना – गुरु चेला एकै लाइनमा – Todays Nepal
कोरियाको सपना – गुरु चेला एकै लाइनमा
‘काम पाइएन डिग्री पास गरेर, भैसी पालेँ गाउँतिरै झरेर, चिन्ता छैन केही….’
पशुपति शर्माले गाएको यो चर्चित गीतलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेका थिए नवलपरासीका ३२ वर्षीय विष्णु पौडेलले । तर गीतमा भने जस्तो सजिलो किन हुन्थ्यो, व्यवहारमा लागू गर्न । फलस्वरुप उनी आज कोरियामा मजदुरी गर्न चाहनेको लामो लाइनमा उभिएका छन् ।
कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन केन्द्र रहेको महाराजगञ्जस्थित काठमाडौं भ्याली स्कुलमा भेटिएका हुन् यी डिग्रीहोल्डर । पढाइ सकेर गाउँ जाँदा डिग्री गरेको केटोे भैँसी पाल्न आयो भनेर गाउँलेले उडाएको उनले बताए । तैपनि हिम्मत नहारिकन व्यवसायिक भैसीपालन सुरु गरेका उनी यसमा सफल हुन भने सकेनन् ।
पौडेल भन्छन्, ‘भैँसी पालेर गतिलो आम्दानी गर्न घाँस चाहियो । तर, सामुदायिक वनले घाँस काट्न त के पाइला राख्न पनि दिँदैन जंगलमा । अनि मेरो भैँसीले के खाएर दूध दिने ? भैँसीले दूध नदिएपछि मैले कसरी कमाउने ?’
अघिल्लै दिनदेखि लाइनमा
बिहिबार दिउसो पुग्दा प्लाष्टिकका ‘म्याट्रेस’ यत्रतत्र छरिएका थिए । प्रहरीका अनुसार ति म्याट्रेस बुधबार बेलुकी लाइन बस्न आएका आवदेकहरुले ल्याएका हुन् ।
लामो लाइनको व्यवस्थापन गरिरहेका एक प्रहरी जवानले भने- ‘हिजो बेलुकी ५ बजे आवदेन बन्द हुनासाथ नै युवाहरु आजलाई लाइन बस्न आए । रात यतै बिताए ।’
रातिदेखि लाइनमा बस्नेमध्येका एक हुन् दोलखाका शम्भु बोलखे । उनी राति २ बजेदेखि लाइन बसेका रहेछन् । विहान १० बजेसम्म पनि आवेदन केन्द्र भित्र छिर्न उनको पालो आएको थिएन । ३० वर्षीय बोलखेसँग बीएड पास गरेको सर्टिफिकेट छ ।
यति पढेको मान्छे विदेशमा श्रम गर्न किन जानुपर्‍यो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पौडेलले जवाफ दिए, ‘प्रमाणपत्रले खान दिँदैन, नत्र कसलाई रहर थियो र ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले आफ्नो छेउमा उभिएका एक युवकलाई धाप मार्दै भने- ‘यो भाई २० वर्षको भयो, म ३० को । उसको गोजीमा बाउले दिएको पैसा होला, मैले त ऋण खोजेको । मेरो घैँटोमा घाम लागेर १० वर्षअघि विदेश गएका भए यतिबेला बिहे गरिसक्थेँ होला ।’उनको ठट्यौलो उत्तरपछि वरपरका युवामाझ हाँसोको फोहोरा छुट्यो ।
बोलखेले हौसिदै झन् कडा टिप्पणी गरे, ‘यो देश फलाउने, फुलाउने जिम्मा हाम्रै हो, तर, हामीलाई देशले सिनो सम्झिएको छ । यो सिनो पर गइदिए दुर्गन्ध कम हुन्थ्यो भन्ठानेको छ । यो देशमा पसिना बेचेर खान्छु भन्नेलाई दलालको ब्यवहार हुन्छ ।’ वरपरका केही युवाले सिठ्ठी फुकेर समर्थन गरे ।
झण्डै २ हजार युवाको लाइनमा भेटिए नुवाकोटका युवक थापामगर । उनले कक्षा १२ पास गरेका छन् । काठमाडौं माछापोखरी बस्दै आएका उनी कमाउनकै लागि कोरिया जान चाहेको बताउँछन् । ‘यहाँ बसेर केही हुँदैन, नबिग्रेको मान्छे पनि उल्टै बिग्रिन्छ’ उनले भने-‘न कमाइ छ, न भोलिको कुनै आश ।’
थापामगरसँगै उभिएका प्रदीप काफ्ले स्याङ्जाका हुन् । उनी अहिले शंकरदेव कलेजमा मास्टर्स डिग्री पढिरहेका छन् । बिहान ३ बजे लाइनमा आएको बताउने काफ्लेले १ बजेसम्म फारम भेरेर निस्किने अनुमान गरे । ‘हामी ३ बजे आउँदा यहाँ लामो लाइन लागिसेकेको थियो, बेलैमा नआएको भए पालो नपाइने रहेछ ।’
गुरुचेला नै लाइनमा
कोरियाको सपना किन ? ललितपुरका सुवर्ण डंगोललाई हामीले सोध्यौं । उनले जवाफ दिए-‘यो प्रश्नको उत्तर मलाई पढाउने सरलाई गएर सोध्नुस् । उहाँ यही लाइनमा हुनुहुन्छ ।’ आफ्नै शिक्षकसँग प्रतिश्पर्धा गर्नुपरेको भन्दै उदेक मानिरहेका थिए डंगोल ।
‘म त लफंगा भएँ भनेर कोरिया ट्राइ गर्दैछु’ उनले भने-‘कलेज पढाउने मास्टरलाई पनि कोरियाको ज्वरो चढेको छ । अब देश कता जाँदैछ भन्ने यसैबाट बुझ्नुस् न ।’
रसुवाका सन्तमान तामाङ देश यही हालतमा रहिरहे अधिकांश युवा ‘पागल’ हुने बताउँछन् । ‘यो देश तातोहाँडी हो, यहाँभित्र बस्दा युवालाई जलन हुन्छ’ उनले कडा शब्दमा भने-‘यहाँ जन्मुनु पनि बिडम्बना जस्तो भएको छ । राज्य लाश जस्तो छ, राज्य चलाउनेहरु लुटेरा जस्ता । बेरोजगारी, महंगी र तनावले युवालाई पागल बनाउदैछ ।’ उनले ९० प्रतिशत युवा डिप्रेसनमा गइसकेको दावी पनि गरे ।
लाइनमै भेटिएका केही युवा कोरियाले यस वर्ष कामदारको कोटा घटाएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै थिए । ‘श्रीलंकाबाट कामदार लैजान भन्दै नेपालको ८ हजारको कोटा ३ हजारमा झारिएको छ’ बाराका सुमन आचार्यले भने- ‘हाम्रो सरकारले कोटा घट्न नदिन कुनै पहल गरेन । बीएस्सीको पढाइ छोडेर भाषा पढेको, तर गाह्रो पर्ने भो ।’
गोर्खाल्याण्डलाई नेपालको सुझावः नेपालमा गाभियौ भने प्रधानमन्त्री, भारतमा सांसद पनि मुस्किल